JINGHPAW KASA: ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ ဂထန်ယန် ရွာသူရွာသားများကို ပြန်လည် နှိပ်စက်
ဗမာအစိုးရစစ်တပ်မှ ဂထန်ယန် ရွာသူရွာသားများကို ပြန်လည် နှိပ်စက်
အောက်တိုဘာ (၂၃) အင်္ဂါ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အိုအစိုးရ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တပ်မဟာ (၂) နယ်မြေဖြစ်သော မိုးကောင်း - ဖားကန့်လမ်း နမ့်ဆီးအန်ကျေးရွာတွင် အောက်တိုဘာ (၁၉) ရက်နေ့၌ အပြစ်မဲ့ ရွာသူရွာသားများကို မတရား နှပ်စက် ညင်းပမ်းခဲ့သော ဗမာအစိုးရစစ်တပ် တပ်မ (၈၈) ၏တပ်ရင်းများသည် ယခုအခါ ကားမိုင်းမြို့ အနီးရှိ ဂထန်ယန်ကျေးရွာသူ ရွာသားများကို ပြန်လည် နှိပ်စက်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်း သတင်း ရရှိပါသည်။ ယခုအခါ ဂထန်ယန်ကျေးရွာ၊ လွယ်ဆိုင်ကျေးရွားများမှ ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များ၏ ညင်းပန်း နှိပ်စက်မှုကြောင့် ထွက်ပြေားလာသော ဒုက္ခသည် (၁၃၆) သည် ကားမိုင်းမြို့ရောက်ရှိနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
The Burmese Government troops tortured again in Ka Htang Yang innocent civilians, which is under KIA (2nd) Brigade area, Western Kachin State, according to the KIA front-line officer report. On 19th October, the Burmese Government troops from division (88), that was the same troops that they tortured the Nam Si En civilians, arrived Ka Htang Yang village, after that the troops arrested and tortured the innocent villagers. Thus, 136 villagers from Loi Seng fled away to Kamaing for the security.